Odayaasha Reer Dhagaxbuur oo Gogol Dhigay Faafi iyo Maryakanka oo uu Kulan Kale ka Socdo – Rasaasa News
Aug 30, 2010 dambiile, Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Odayaasha Reer Dhagaxbuur oo Gogol Faafi Dhigay, Ogaden, ONLF, somalia
Jijiga, [Aug 30, 2010] – Wararka ka imanaya magaalada Jijiga ee xarunta Ismaamulka Somalida, ayaa sheegaya in uu maanta ka bilowday magaalada Faafi oo ka tirsan gabalka Jijiga kulan ku saabsan gogol ay fidiyeen Odayaasha reer Dhagaxbuur.
Kulanka gogosha, ayaa la filayaa in uu socondo saddex maalmood, waxaana ka qayb galay dhamaan beelaha dega dhulka Somalida Ogadeeniya.
Kulanka ayaa waxaa uu ku saabsan yahay hadalo ka soo baxay Ra,isul wasaaraha Itobiya, ka dibna uu Jwxo-shiil, hadal kale Internetka ku qoray. Hadaladaas wixii abuuray ayey odayaasha reer Dhagaxbuur jeclaysteen in ay ka dabo tagaan.
Ra,isul wasaaraha Itobiya ayaa sheegay in ay UWSLF iyo ONLF, ay nabad qaateen beelaha taageerana ay nabada la qaateen isaga oo yidhi “reer cabdile oo ah beel balaadhan ah nabad bay qaadatay, reer Isaaq oo ah beel yarna waxay wali wadaan colaad.”
Jwxo-shiil, ayaa soo saaray qoraal leh “Itobiya waxay doonaysaa in ay gumaado beel ka mid ah beelaha dega dhulka Somalida Ogadeeniya oo uu ula jeedo beesha degta gabalka Dhagaxbur.”
Labadaas hadal, ayaa waxaa ay noqdeen kuwo u egg in beesha reer Dhagaxbuur ay dagaal wado oo Itobiyana ay wax ka qaban doonto, jawaabta uu Jwxo-shiil, ku qoray Internetka ayaa arinta murgisa, una ekaatay in beeshu dagaal ku taageersan tahay isaga.
Jwxo-shiil, ayaa sida la sheegay hadalkaas ka xanuunsaday, kulamana la yeeshay beeshiisa qurbaha joogtana, waxaana uu u sheegay in uusan kulan dambe iyo hadal colaadeed oo dambe midna saxaafada ka sheegi doonin, hadalka la qorayna uusan isagu masuul ka ahayn.
Waxaa dhab ah, bay dadku leeyihiin in labada urur ee nabada qaatay ay ka maqan tahay beesha degta Gabalka Dhagaxbuur, oo ay beesha inteeda badani taageersan tahay Jwxo-shiil, oo hore u cadeeyey in uusan nabad qaadanaynin dagaalna uu wadi doono.
Wararka hordhaca ah ee ka soo baxaya kulanka ayaa sheegaya in ay doonayso in ay beeshu cadayso mawqifkeeda ah in ayna taageersanayn Jwxo-shiil, cidii dambe ee beesha ah ee lagu arko iyada taageersan ama shir ugu tagaysa in ay beeshu wax ka qaban doonto.
Beeshu waxay kulanka ku marti qaaday dawlada degaanka Somalida, Jabhada UWSLF iyo Jabhada ONLF, oo iyagu nabad qaatay ayey xubno badan oo kuweed ah oo joogaan gudaha Ogadeeniya ku marti qaadeen.
Dhinaca kale, waxaa dalka Maraykanka ka dhacay shir ay yeelatay qurba joogta beesha reer Dhagaxbuur oo isaga laftigiisu la socda shirka ka dhacaya magaalada Faafi ee gabalka Jijiga. Waxaana la filayaa in ay beeshu ka soo saarto go,aan cad oo ku saabsan taageerada lagu sheegay in ay taageerto Jwxo-shiil.
Wixii war ah ee ka soo kordha shirka waanu idinla soo socd siindoonaa..